WAA MAXAY FERNS: DOORASHADA EE FERN FOR BEERTAADA - SOOSAARKA DALAGGA
Noocyada iyo noocyada ferns ee beerta (description iyo sawir)
Fern - mid ka mid ah kooxaha ugu da'da ah ee dhirta dilka ah, kaas oo kacay kacdoon ka hor horumarinta dalagyada ubax on meeraha. Dhirta Kuwani waxay leeyihiin qaab dhisme ah, taas oo aan waxba sida dhismaha ubax.
Ka soo horjeeda fikirka qaldan, ferns marna bloom. Duurjoogta, waxay ku dhufanayaan isticmaalka dhirta ku yaal qaybta hoose ee caleemaha qaab udub dhexaad ah (sorus), daboolay filimada. Gawaarida waxay ku dhacaan dhulka iyo saxan yar oo caleen ah ayaa ka soo baxda, taasoo soo saarta unugyada jeermiska.
Ferns ma laha caleemo run ah (sida ka baxsan caleemaha ubax), laakiin halkii ay ku kala duwan yihiin taarikada caleenta caleenta ah, ama, sida saxda ah loo yaqaan, fronds. Waxaa ka mid ah noocyada kala duwan ee ferniga ah waa noocyo badan oo lagu qurxiyo, kuwaas oo si ballaaran loogu isticmaalo naqshadda muuqaalka.
Waad ku mahadsantahay muuqaal aan caadi aheyn, muuqaal ah, ferns waxay noqon kartaa quruxda dhabta ah ee beerta iyo siin goob kasta oo ah aesthetic iyo muuqaal wax yar oo qarsoodi ah. Waxay u muuqdaan kuwo aad u fiican beerista kooxeed, iyo sidoo kale mashiinnada hal mar. Frosts waxay si fiican isku dhafan yihiin dhirta ubaxyada badan iyo dhirta, oo abuuraya muuqaal qurux badan.
Isla mar ahaantaana, nuucyada kasta ee fernu waxay leeyihiin shakhsiyad gaar ah waxayna u taagan yihiin si wanaagsan oo ka soo horjeeda asalka beeraha kale. Ka mid ah ferns waxaa jira dhirta beerta leh magacyo kala duwan, taas oo ku kala duwan ee size iyo midabka.
Waxay noqon karaan kooxo waaweyn, iyo yar yar, xargaha, dhirta jilicsan. Dhammaan cayayaanka oo dhan waxay leeyihiin hal faa'iido weyn - awoodda ay ku koraan oo u kobciyaan meelaha shiilan iyo qoyan.
Ma taqaanaa? Boqollaal malaayiin sano ka hor, xilliyadii Paleozoic iyo Mesozoic, ferns badan ayaa ahaa geedo waaweyn. Waxay ahayd qoryahooda la cadaadiyay oo markii dambe noqday saldhigga aasaasidda dhuxusha.
Hoos waxaa ku qoran tusaalooyinka ugu badan ee noocyada kala duwan ee ferns, mid kasta oo leh magaciisa, oo leh sharaxaad ah noocyada iyo sawirada.
"Boodhka dhogorta", "beerta duurjoogta", "velamkuch", "ferni fern", "qalabka jarmalka" - Kuwani dhammaantood waa magacyada isla wakiil ka mid ah fernska ugu quruxda badan. Tani waa warshad ciriiri ah oo dheer, gaareysa height of 100-135 cm, oo leh rhizome gaaban iyo xoog leh.
Daraasaddu waxay leedahay laba nooc oo caleemo ah: sterile (badan, baal-qaabeeya, illaa 150 cm dhererka, kaas oo sameeya funaan), iyo lowska-qaabeeya (waxaa jira 2-3 yaryar, caleemo aan caadi ahayn gudaha gudaha funniga). Cuntadani waxay jeceshahay ciidda bacrin ah, si fiican u biyuhu, laakiin biyo aan joogsi lahayn. In dhaqanka ee aan qabyo ahayn, xasilloon, laakiin xaaladaha shoog adag xoog leh ayaa u dhiman kara la'aanta iftiinka.
Iyada oo biyo badani koraan si dhakhso ah. Cayayaanka iyo cayayaanka cudurku maaha mid la soo bandhigo. Caadi ahaan dhaqan ahaan - khilaafaadka, iyo sidoo kale qeybinta caleemaha iyo caleemaha hoostiisa. Noocyada noocan ah ee ferns ayaa la siiyay magacan sababta oo ah isku mid ah caleemaha caleemaha dhirta leh ee baadiyaha dhiiqada. Dadka dhexdiisa waxaa sidoo kale loo yaqaanaa "keynta kaynta", "papurushina", "chamomile caamka ah".
Daqiiqada dhirta ayaa ah mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee fermiyada ee naqshadeynta muuqaalka. Waxaa lagu beeray badi ahaan hooska, meel u dhow balliiga dabiiciga ah, xayawaanka alpine, lagu koriyo ama dhirta caadiga ah ee koritaanka gudaha.
Intaa waxaa dheer, waa doorasho aad u fiican oo isku dhafan, iyo inta u dhaxaysa cayayaanka noocan oo kale ah waxay u fiicantahay dhirta ubaxyada hore, tusaale ahaan, barafka ama xakamaynta, tulubyada, daffodils, rinkebyada, iwm Sida ubaxyada ubaxyada laga bilaabo Abriil ilaa Juun, iyo ka dib ubax waxay lumiyaan muuqaalkooda quruxda, furfurka furan ayaa dabooli doona iyaga oo saxaya sawirka guud.
Si kastaba ha noqotee, ma aha oo kaliya guryaha qurxinta oo ay ku jiraan ostrichnik, sababtoo ah sidoo kale waa warshad la cuni karo. Guga, dhalinyaro, aan weli horumarin caleemaha, aan ka badnayn 10-20 cm, cunto qasacadaysan ama la qaboojiyey briquettes (dabcan, fernigeena badanaa looma isticmaalo sida cuntada waqooyi-bari iyo dhexe-bari).
Sidoo kale nuucaan noocan ahi waa guul. loo isticmaalo dawada dadweynaha sida anticonvulsant, sedative, astringent iyo antispasmodic.
Cawska duurjoogta ah, magaca sayniska "blekhnum spiky", - Wakiil aad u yar oo ka mid ah ferns iyo waddamada qaar ka mid ah Yurub waxaa ilaaliya sharciga. Magaca dhirta waxay ka timaaddaa ereyga "duurjoogta", taas oo macnaheedu yahay meel bannaan, duufaan, dooxada u baxda.
Tani waxay sabab u tahay xaqiiqada ah in qashin-soosaarku ay inta badan ku koraan kaymaha jiifka badan, waxaana loo yaqaan 'spikey' for spiky, linear, feathery fronds in si toos ah uga tagaan rhizome. Ahaanshaha dhirta cawska ah, dhirta cagaaran, dobryanka ayaa leh caleemo mitir.
Isticmaal - isbedel la sameeyay, taas oo gaari karta dhererka qiyaastii 50 cm (dhirta qadiimiga ah), oo lagu daboolay qolfaha bunni. Vayi -Pistye, linear-lanceolate, xayiray, ilaa 50-60 cm dherer.
Duurjoogta, noocyada noocan ahi waxay ku koraan kareemka, qoryaha, iyo mararka qaarkood kaymaha Carpathians iyo Caucasus, iyo sidoo kale gobollada qaar ee Galbeedka Yurub, Bariga Aasiya iyo Waqooyiga Ameerika.
Ferns of noocyada noocan oo kale ah waa mid awood leh ee koraya, ma u dulqaadan qabow iyo qoraalada. Si joogta ah u baahan baahida qoyaanka kordhaya, inkasta oo aysan jecleyn in la buufiyo.
Walaac Dheddig ah
Walaac Dheddig ah - noocyo kala duwan oo ferns ah, ka tirsan qoyska Kochedizhnikov. Waxay leedahay lacy iyo caleemo cagaaran oo cagaaran, taas oo ka soo horjeeda caleemaha aan qalafsanayn ee tirtiraha labka ah. Labadan nooc ayaa inta badan ku soo koraya, sidaas darteed, muddo dheer ayaa loo yaqaan "lab" iyo "haween." Si kastaba ha ahaatee, bayoolajiistu waxay tixgeliyaan magacyada noocaas ah si ay u noqdaan khaladka foosha taranka.
Saldhigga haweenku wuxuu ku koraa qolalka qayb ahaan iyo meelaha qoyan ee shimbiraha ah, jasiiradaha iyo xayawaanka peat kalluunka ee buuraha iyo buuraha hoose. Magaca "reer-guurta" ayaa tilmaamaya nooca la helay ee xaqiiqda ah in xilliyada dhuxusha ay ka dhigan tahay qoryaha. Doontu waxay gaartaa dherer 30 illaa 100 cm, waxay leedahay laba jibbaar iyo seddex xabbadood oo fara badan oo la soo ururiyey oo la ururiyey xirmo ku faafaya. Waxyaabaha ka soo jeeda hoose ee caleemaha waxaa lagu daboolay bristle fringed. Nudaha noocyada noocaan ah waa mid weyn oo gaaban. Feerka si dagan ayuu u kobcin karaa hal meel ilaa 10 sano wuxuuna awoodaa in uu ku dhufto is-goosashada.
Tilmaamaha noocan ah ayaa sidoo kale ku jira awoodda ay u leeyihiin in ay dayactiraan, sida haddii muuqaalka kaliya ee shaaca laga qaaday xilli-ciyaareedka, taas oo fududeeya taarikada caleen cusub oo joogto ah. Muujinta noocan oo kale ah waxay u kala duwan tahay, tusaale ahaan, laga bilaabo ostrichaha si fiican loo yaqaan, kuwaas oo froze waxaa la aasaasay oo kaliya guga. Inta lagu jiro jiilaalka, taarikada caleen ee maqaarka reer miyaga ayaa u dhinta.
Noocyada noocan oo kale ah ee ferns waxay u fiican tahay sii kordhaya beerta waxayna u muuqdaan kuwo aad u wanaagsan oo ku yaala geesaha hoose ee beerta xiga ee martida. Gaar ahaan dadka caanka ah ee naqshaduhu waa kuwa reer miyiga ah iyo midabada madow.
Ma taqaanaa? Waxaa jira aaminsanaan caan ah oo muddo dheer ah oo ku saabsan miyiga dumarka ah, oo odhanaya: haddii habeenkii Ivan Kupala ku fariisto qulubka fernan, oo ku dhuumanaya miis fadhiya, ka dibna waxaad arki kartaa mustaqbalka.
Xaruunta - Noocyada dhif ah ee ferns in koraa ee dillaac ah dhagaxyada iyo leedahay magac kale - "xidid macaan". Waxaa loo qaybiyaa kaynta, buuraha kaynta, subalpine iyo buuraha tufaaxa ee dhul-beereedka. Caan ahaan waxaa loo yaqaan "foosto feer", "ferni fern" iyo "cawska dhaadheer".
Waa geedka gaaban oo sii kordhaya, oo leh cufan, caleemo, saxarado caleen badan leh, oo gaadhaya ilaa 20 cm oo dherer ah. Caleemaha ayaa soo baxa oo xajinaya midabkooda jiilaalka. Abuuritaanka rhizeome, qaabeeya sida arthropod, daboolay qolfaha cawl iyo wuxuu leeyahay dhadhan macaan sababta oo ah content ee glycosides. Tani, noocan ah ee fern iyo naannaceen macaan.
Cudurka Centipede ayaa ku yaal hoosta hoose, adigoo ku jira xididka dhexe ee laba saf, wuxuu leeyahay midab huruud ah oo dahab ah oo uu u bislaado xagaaga hore. Rikoodhadu waa mid aad u xasaasi u ah iftiinka iyo tareenka.
Noocyada waxaa si weyn loo isticmaalaa dhirta xayawaanka ah, gaar ahaan marka la abuurayo ururinta ferns beerta.. Waxaa lagu beeray labada koriyo iyo berrinka bannaan marka la abaabulayo qaababka dhirta.
Rhizomes iyo caleemaha of millipede ayaa bogsashada guryaha oo si guul leh loogu isticmaalo daawooyinka guriga iyo dawada dhaqameed. Codso geedka asxaab ahaan, dabacsanaan, xanuunka, antiseptic, anti-bararka, duriinka, choleretic, diaphoretic iyo caloosha. Feerkaan wuxuu soo saaraa saliid lagama maarmaan ah, taas oo sidoo kale loo isticmaalo daawada.
Waa muhiim! Ma isticmaali kartid warshad cagaaran oo ah qaabkeeda cayriinka ujeeddooyinka daawooyinka, maadaama ay tahay mid aad u sun ah.
Shchitovnik lab ah
Shchitovnik lab ah - Feerka ugu ballaaran ee ciriiriga dabiiciga ah, kaas oo si dabiici ah u kora kaymaha hareeraha, dhererka dhagaxyada iyo buuraha. Magaca noocyadaasi waa asal raashin asal ah oo Roomaan ah, marka la barbardhigo mid kale, oo badanaa la kulmay, taas oo lagu kala soocay jilicsan, furfuran, wyams cagaaran oo cagaaran. Ugu dambeyntii waxaa loogu yeedhaa dheddig, iyo mid ka mid ah xayiraad badan, saxaro madow madow - lab ah.
Tirada labka ah ee labka ah waa dhar qurux badan oo aan qabyo ahayn, oo gaadhaya 30 illaa 150 cm, wuxuu leeyahay jajab xoog leh, cagaar iftiin ah, laba joodar leh caleemaha caleenta ah, kuwaas oo ku yaalla on petioles dheer, waxay sameeyaan rosette quraarad ah. Cudurka ayaa ku yaala dhinaca hoose ee frost waxaana lagu ilaaliyaa kilyaha-qaabeeya, tufaaxa. Loogu talagalay noocan oo kale ah noocyada iyo naasaha la naanaysto.
Xuubka Thyllaria ayaa si tartiib ah u koraaya, sanadka ugu horeeya wuxuu ku sameeyaa burooyinkoodii caleen ee dusha sare ee rhizome. Sannad labaad ee xilliga sii kordhaya, caleemaha waxay noqdaan sifo dabacsan oo muuqaal ah oo daboolay qolfaha ilaalinta. Sannadka saddexaad oo kaliya, taarikada caleenta ee gaardiyaanka labka ah ayaa soo jeestay waxayna gaareen horumarintooda oo dhan. Xilliga xagaaga, waxay kala firdhiyaan ubucda, iyo dayrta way dhintaan. Noocyadaasi waxay dib u tarjumayaan, badiba waxay u qaybiyaan xididka.
Xayawaanka labka ah waxaa loo adeegsadaa sida dhirta xayawaanka ah, iyo sidoo kale sida qayb ka mid ah beerista beerta caleemaha beerta (xididdada jilibka waa qayb muhiim u ah substrate epiphytic).
Ma taqaanaa? Shchitovnik lab ah - wuxuu muddo dheer ahaa geedkii ugu jeclaa ee dad badan, oo loo yaqaan "Perun fireflower". Waxa lagu soocay waxyaabo qurxoon oo la aaminsan yahay in fernahan blooms habeenkii Ivan Kupala. Qofkasta wuxuu helay midabka feerka habeenkaas, wuxuu furay hadiyadda koritaanka iyo aqoonta caalamka. Fireblood, oo sida la aaminsan yahay, wuxuu samayn karaa nin aan la arki karin, awood u siin jinni jinni iyo kufarin hanti iyo farxad leh.
Bracken fern - muuqaal aad u qurux badan, si fiican loo yaqaan bannaanka u hiwaayadda. Waxay ka kooban tahay meel kasta oo jilicsan oo jilicsan: keynta-tundra ee Siberia iyo Kanada, kaymaha qalalan ee Europe, iyo sidoo kale Australia. Gaaruhu ma koraan duurka oo kaliya meelaha aadka u qallalan ee qallalan iyo lamadegaanka.
Magaca noocan ah ee fernuhu wuxuu ka yimaadaa qaabka saxanka caleen, sababtoo ah Giriigga, erayga "pteris" macnihiisu waa "garabka", iyo aquila latin macnaheedu waa "gorgor". Bracktails waxay leeyihiin urin qaas ah, oo ay ku jiraan fayodhawrka iyo hanti maandooriye ah. Sidaa awgeed, miraha iyo alaabooyinka waxaa badanaa lagu duuduubaa bacaha baalal-galka ah ee nabadgelyada.
Si kastaba ha noqotee, xoolaha xayawaanka ah, dharku waa sun. Ash ee noocan ah ee ferniga ku jira badan oo potassium ah, sidaas darteed beerta waxaa inta badan loo isticmaalaa sida additive ee compost.
Si ka duwan sida dhufaysigu, dharku waa ferni hooseeya waxayna gaartaa heer aan ka badnayn 70 cm, waa wax aan qabyo ahayn oo kori kara dhul aan fiicnayn, carrada qallalan. Bracken rhizome - dheer, horizontal, aad u caan ah. Vayi adag, waxay haystaan ​​saxan saddex weeyn oo waaweyn. Salka hoose ee caleemaha hoose waa qulqulo leh dareeraha macaan ee keenaya dhirta. Qeybta xaashida gawaarida geedka waxaa lagu duuduubay, sidaas awgeed waxay ku dabooli kartaa xarfaha hoose ee warqadda.
Inkasta oo quruxda noocan ah ee fern waxaa dhif ah lagu beeray beerta ama dalka. Taasi ma tahay haddii goobtu ay ku dhowdahay qaab dabiiciga ah, dabiiciga ah, oo leh xajmiga dhirta cawska ama geedaha. Dabadeedna baraha ayaa u muuqda mid qurux badan.
Rhizomes noocyada noocan ah ayaa ku kala duwan guryaha daryeelka. Daawada dadweynaha, duufaan waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo qufaca, scrofula, xanuun ku dhaca kala goysyada iyo prostatitis, iyo gobolada qaarkood xitaa waa la ilaaliyaa.
Dalal badan, sida Shiinaha, Kuuriya, Japan, wadamada qaar ee Koonfur Afrika, caleemaha yaryar iyo caleemaha caleenta ah waxaa loo isticmaalaa khudaar, sida asparagus. Caleemaha waxaa lagu hor mariyey biyo cusbayn, la shiilay, salad lagu dhajiyo, loo isticmaalo buuxinta, xawaashka iyo diyaarinta isku dhafka iyo foomka la kariyey. Rizjiyada jajaban waxaa loo isticmaalaa rootiga dubista, dhirta waxaa sidoo kale loo isticmaalaa sidii loo xakameyn lahaa cayayaanka, iyo walxo cayriin ah oo loogu talagalay qalajinta.
Noockan noocan ah wuxuu awoodaa inuu qurxiyo wixii gudaha ah. In duurka, waxay ku koraan kaymaha Ukraine, Ruushka, Japan, Korea, Shiinaha, iyo sidoo kale kaymaha qoyan ee South Africa. Si ka duwan suuqyadeeda, tsirtrium wuxuu u dulqaadan karaa hooska, hawada qalalan, la'aanta qoyaan. Noocyadaasi waxay leeyihiin xoqan, xididdada cagaaran oo ku dhow gebi ahaanba dhulka hoostiisa.
Fronds - Baaxad weyn, dhalaalaya, cagaaran-cagaaran, googooto, maqaarka, si ba'an u faafay, si toos ah uga soo baxaan dhulka, waxayna ku yaallaan a petiole dheer. Dhinacooda hoose waa muran. Dhererka saxanka caleenka ah ee isku dhejinta dhererkoodu wuxuu gaaraa 50-60 cm, feerka naftuna wuxuu gaaraa 35-60 cm oo dherer ah. Beeraha yaryar ayaa si tartiib ah u koraan, iyo xaaladaha beeraha gudaha ah, noocyada noocan ahi waa mid aad u hooseeya.
Adantum-ka qaabaysan - mid ka mid ah noocyada ugu quruxda badan ee ferns, oo leh yar, jilicsan, caleemo jilicsan. Waxay ku koraan kaymaha adkaa ee Waqooyiga Ameerika iyo Bariga Aasiya.
Warshadani waa qaab muuqaal ah, waxay gaartaa dhererka 60cm waxayna leedahay dabaqyo, joodar caleen ah oo caleen ah oo khafiif ah, petioles madow. Fronds - qaab cagaaran oo cagaaran, oo si ba'an loo faafiyo, loo qaabeeyay horizontal. Sori oo ku yaala cidhifyada taarikada xaashida foornada iyo daboolka filimka la jeexay ee xaashida, bunni. Tani waa noocyo aad u adag jiilaalka oo adkeyn kara dhaxanta hoos udhaca illaa -35 ° C.
Astiantum-ku-qaabaysan kaamil ah waxay haysaa saamaynta qurxinta xilliga xagaaga: laga bilaabo Maajo ilaa dhaxanka ugu horreeya. Si fiican ayaa loo soo saari karaa iyada oo loo qaybinayo baadiyaha, taas oo ugu wanaagsan ee la sameeyo dhammaadka xagaaga. Wuxuu hiwaayadaa hooska, carrada bacriminta leh ee bacrin ah iyo qoyaan dhexdhexaad ah. Tan iyo adantumka aad u qurux badan, dhirta si fiican u aragto, qaybaha dhexe ee sariiraha ubaxyada. Waxay u fiican tahay beeraha dhagaxa iyo meelaha bannaan.
Warshadu waxay leedahay guryo daaweyn ah oo kuu oggolaanaya inaad si guul leh ugu daboosho daawada Shiinaha sida soojiideyaal. Dalka Mareykanka iyo Kanada, caleemaha cusub ee caleen ayaa la calalin karaa cudurrada caloosha, iyo faleebada caleenta caleen ayaa loo isticmaalaa sidii loo kicin lahaa oo soo kabsanaya cudurrada joogtada ah ee xubnaha neefsashada.
Sidoo kale, faleebo ee caleemaha waxaa loo isticmaalaa in lagu duro timo. Kanada, Japan iyo Hawaii, cawska dhirta waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii alaab dhamaystiran oo loogu talagalay alaabta la taaban karo.
Asplenium ama Kostenets - Tani waa nooca feerka ah ee feerka beerta, kala duwanaanshaha ugu weyn ee ay ku jiraan caleemaha, oo aan la mid ahayn caleemaha ferns kale. Thanks to feature this, aspleenia aad bay u badan tahay xaaladaha koritaanka gudaha.
Noocyada waxay u qaybsan yihiin 2 qaybood oo kala ah: Dareemo iyo go'doomin. Dhamaan goobaha ayaa koray, iyadoo dhirta qaarkood laga heli karo gawaarida Australia, Bariga Afrika, New Zealand, iyo Hindiya.
Aspleniums waxay leeyihiin gaaban, hareeraha qolof ah oo caleemaha iyo caleemaha cagaaran ee noocyo kala duwan, isku duway ee rosette ah. Fronds waa muddo dheer, oo leh geeso istiraatiiji ah, casaan-dillaacsan, saddex-gees, xiphoid. Dhererka taarikada caleenta wuxuu gaari karaa 75 cm. Dhexdhexaadiyaha saxanka cagaaran ee cagaaran wuxuu ku yaalaa midabka Midrib ee midab-badeedka. Caleemaha aslenium waa kuwo aad u jilicsan oo aan jeclayn inay taabtaan gacmahooda. Gawaarida waxay ku yaalaan sida noocyada kala duwan - dhinaca hoose ee frond.
Noocyada Asplenium waxay leeyihiin noocyo badan (qiyaastii 800), kuwaas oo ah kuwa ugu caansan ee suunka, Aspenium viviparous, Koonfurta Aasiya Aslenium, Black Asplenium iyo Aspenium Lukaceous.
Xilliga iyo daryeelka saxda ah, noocyada noocan ahi waa mid aan la qabin, laakiin ma jecla in ay ku buufiso, si kastaba ha ahaatee, sida ferns kale oo badan. Lagu faafiyo xayawaan iyo burooyinkeeda.
Waa muhiim! Dhaqan ahaan noocyada kala duwan ee fermiga oo keliya ma jecla marka caleemaha la taabto (taarikada caleenta ee dhirta waxay noqdaan huruud ah meelaha meelaha laga taabto). Sidaa darteed, si ay u koraan ferns qurux badan, waa in ay ahaadaan kuwo aad u dhib badan sida ugu macquulsan.